ब्राह्मणबाद बिरुद्ध हाम्रो संघर्ष, "बाहुनबाद"लाई ठिक ढंगले नबुझ्दा सबैभन्दा बढी बाहुन नै आत्तिएका छ्न - MONGOL KHABAR
ब्राह्मणबाद बिरुद्ध हाम्रो संघर्ष, "बाहुनबाद"लाई ठिक ढंगले नबुझ्दा सबैभन्दा बढी बाहुन नै आत्तिएका छ्न
काठमाडौ । "बाहुनबाद" शब्दको प्रयोग यतिबेला अत्यधिक भइरहेको छ । "बाहुनबाद"को पयार्यवाची शब्दका रुपमा "ब्राह्मणबाद"पनि भन्ने गरिएको छ । बिशेषगरी जनजाति र दलित आन्दोलनमा यो शब्दलाई बढी प्रयोग गर्ने गरिएको छ । नेकपा माओबादीले पनि "बाहुनबाद"शब्दलाई प्रयोगमा ल्याएको छ । तर बाहुनबाद (ब्राह्मणबाद) शब्दको अर्थ र त्यसको क्षेत्र के हो ? यसको उचित ढंगबाट परिभाषा नहुँदा "बाहुनबाद"को अर्थलाई गलत ढंगले बुझ्ने र अपबख्या गर्ने खतरा पनि बढिरहेको छ ।
"बाहुनबाद"लाई ठिक ढंगले नबुझ्दा सबै भन्दा बढी त बाहुन नै आत्तिएका र डराएका छन् । "बाहुनबाद"भनेको बाहुन जातिकै बिरोध हो भन्ने भ्रम कतिपयलाई परिरहेको छ । यसै कारणले गर्दा पनि 'बाहुनबाद'को सही ढंगबाट परिभाषा एबं ब्याख्या गरिन आबश्यक छ ।
पं.कुलचन्द्र गौतमकृत् अमरकोषमा ब्राह्मणलाई 'चार बर्णमध्ये एकको नाम' भनिएको छ । (पं कुलचन्द्र गौतम पृ-१४३) त्यसैगरी, सोही अमरकोषमा ब्राह्मणका ६ वटा प्रर्यायवाची अर्थ दिइएको छ । ती हुन- द्धिजाति, अग्रजन्मा, भूदेव, वाडव, विप्र र ब्राह्मण उही अमरकोषमा ब्राह्मण र "पण्डित"लाई अलिक फरक किसिमले अथ्र्याइएको छ । "पण्डित"का डेढदर्जन पर्यायवाची शब्द उल्लेख गर्दै भनिएको छ - बिद्धवान, बिपश्रित, द्धोषज्ञ, सन्, सुधी, कोबिद, बुध, धीर, मनिषी, ज्ञ, प्राज्ञ, संख्यावान, पण्डित, कबि, धीमान, सूरि, कृती, क्रृष्टि, लब्धबर्ण बिचक्षण, दूरदर्शी र दीर्घदर्शी (उही पृ-१४४)
उपर्युक्त शब्द अर्थहरुलाई हेर्दा ती अत्यन्तै पक्षपातपूर्ण देखिन्छन् । पण्डितलाई त्यतिधेरै बिभूषण लगाईएका भए पनि यति बेला आफूलाई पण्डित बनाउनेहरुमा कत्तिको बिद्धता छ भन्ने कुरा लोकलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर, सबै ब्राह्मण पण्डित हैनन् भन्ने कुरा चांहि अमरकोषले प्रस्ट पार्दछ । ब्राह्मण भनेको चार बर्ण मध्ये एक जातिको प्रतिनिधि मात्र हो भन्ने कुराको प्रमाण यसबाट मिल्छ । ब्राह्मणले आफूलाई ज्ञानी पण्डित वा बंशाणुगत हिसाबले प्राज्ञ वा श्रेष्ठ ठान्नु भ्रम मात्र हो भन्ने पनि यहिबाट पुष्टि हुन्छ ।
ब्राह्मणबाद भनेको एउटा दृष्टिकोण हो, दर्शन हो । यस दर्शनमा अरुलाई होच्याएर तल्लो दर्जामा दासत्व र प्रभुतवबादी प्रचलन कायम राख्दै कुनै एक जातिबिशेषलाई मात्र जन्मदै ठुलो र पूजनीय भनी उपल्लो तहमा राखिन्छ भनेर डोरबहादुर बिष्टले प्रष्ट पारिएको छ ।
हाल बेपत्ता अबस्थामा रहेका नेपालका चर्चित इतिहासकार एबं समाजशास्त्री डोरबहादुर बिष्ट नै तयस्ता उल्लेखनीय ब्यक्ति हुन्, जसले बाहुनबाद र नेपाली समाजमा यसले पारेको कुप्रभावका बारेमा बिषद् ब्याख्या गरेका छन् । बिष्टले भाग्यबाद र बिकास एबम नेपालका जनता नामक आफ्ना प्रशिद्ध दुई कृतिमा बाहुनबादको राम्रो बिश्लेषण गरेका छन् , जुन किताब नेपालका सबै बाहुन क्षेत्रीले गहिरिएर अध्ययन गर्न आबश्यक छ ।
डोरबहादुर बिष्टले एउटा छुट्टै प्रसंगमा बाहुनबादको बिषयमा भनेका छन् - 'मुलुकमा बिध्धमान असमानता, कुरीति जातिय भेदभाव, उच्च - नीचको कारण देश बिकासमा अबरोध खडा भएको छ । यो साम्प्रदायिताले जन्मदै ब्राह्मण जात ठुलो र पूजनीय हुने अबैज्ञानिक परम्परा रहेको छ । अर्थात् प्रतिभा, सीप, बिद्धता कलाको आधारमा नभई यहाँ जातजातिको आधारमा मूल्यांकन हुने गरेको छ । यस्ता गलत प्रबृत्तिको प्रतिकार गर्नेहरु माथि साम्प्रादायिक भनेर ब्राह्मणबादीहरुले बिशेष गरि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन -डा.गोपाल गुरुङ संगठनका नेता कार्यकर्ता र समर्थकलाई आरोप लगाउदै आईरहेका छन् ।
सतीले सराप गरेको देशमा न्याय र समानताको निमित्त आवाज बुलन्द गर्नेहरु अन्यायीहरुको दृष्टिमा सह्य किन हुन्थ्यो र ? हुन त ब्राह्मणबादका आलोचक, न्यायप्रेमी ब्राह्मणहरु पनि यहाँ नभएका होइनन् । तर, अहिले आएर मुलबासी मंगोल संगठित भएर आफ्ना जायज सवाल प्रति सजग हुन थालेका छन् । यस कुराले समेत कट्टरपन्थी, अतिपन्थीहरुको निमित्त असह्य मात्र नभएर आत्तिएन पुगेको छ ।
ब्रह्माण्डहरुले हाल नेपालमा क्रिश्चियन धर्म हाबी भयो, हिन्दु धर्म माथि कुठाराघात भयो भन्न थालेका छन् । तर, नेपालका अन्य मुलबासी मंगोल जातीका मौलिक धर्म सस्कार, सस्कृति माथी ऐतिहासिक काल देखि नै हिन्दुधर्मले एकछत्र दमन गर्दै आएको कुरा चै किन देख्दैनन् ? किन बोल्दैनन् ? प्रश्नवाचक चिह्न आफ्नै ठाउँमा रहेको छ ।
हेर्नुस, गोपाल छांगछा राई, ब्राह्मणबाद बिरुद्ध हाम्रो संघर्ष, छहारा प्रकाशनमा आफूले अघिसारेको बाहुनबादी बिचारको निन्दा गरेको भन्दै बिष्टले डा.डिपी भण्डारीको खरो आलोचना गरेका छन् । डा.भण्डारीको कडा खण्डन् गर्दै बिष्ट सोही प्रसंगमा भन्छन् - ब्राह्मण र ब्राह्मणबाद जस्तो जुन गलत ब्याख्या अहिले प्रचारमा आउन थाले को छ । त्यो अत्यन्तै निराशाजनक छ । यो भनाई डा.दुर्गा प्रसाद भण्डारीको हो । उनले हिन्दु धर्म र संस्कृतिको बिरोध एक नयाँ ब्यापार भनी एक दैनिक समचारपत्रमा एउटा बिचारोत्तेजक लेख छपाएका छन् ।
उपर्युक्त हरफ त्यहीँ बाट लिएको हो । हिन्दु धर्म र संस्कृतिको बिरोध तथा ब्यापार हो भने के हिन्दु धर्म र संस्कृतिको समर्थन चाँहि ब्यापार ठहरिन्न र ? पशुपतिका भट्ट के गर्छन ? घाम जस्तै छर्लग छ । डा.दुर्गा प्रसाद भण्डारी ज्यू आफै ब्राह्मण भएकाले उनको ह्दयमा ब्राह्मणबादको नकरात्मक पक्षको खण्डन - मण्डनले चोट पुगेको रहेछ ।
मुलबासी मंगोलले यहाँ गरिँदै आएको ब्राह्मणबादको बिरोध भनेको बेद, गीता, रामायण, महाभारत, बर्णभेद, नीति आदि ग्रन्थको र कुनै ब्राह्मणजातिको बिरोध होइन । ब्रह्मणबादको बिरोध भनेको रुढीबाढी अबैज्ञानिक अभौतिक कर्मकाण्ड, अन्धबिश्वासको बिरोध हो । 'मनुस्मृति'मा उठाइएका छुवाछुत जातपात जस्ता अति नै संकीण र अमानबीय प्रचलनको बिरोध हो । ब्राह्मणबादको बिरोध एउटा कानुन मात्रको बिरोध भने अबश्य होइन ।
लेखक :- जगत ठाडा मगर